Soo dejisan PicsArt 5.8.0 – Vessoft
Soo dejisan PicsArt
PicsArt – editor awood leh image la cunsur ee shabakada bulshada. PicsArt taageertaa tiro badan oo ah qalab loogu talagalay edit sare iyo ku darayaa effects kala duwan si ay u sanamyadii qorraxda. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan sawirrada xiiso leh, oo la shaqeeya muuqaallo kale oo ku dari marto kala duwan. PicsArt ku jira dukaanka ka dhisay-in oo u suurta galinaya in aan balaadhino oo ah qalab ee software-ka ee edit haboon ee images. PicsArt sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad raadiso dadka kale ee, subscribe, aragtida iyo image gallery faallo.
Taageerada saamaynta iyo sida diirada loo tafatiro badan
Taageerada xubno ka mid ah shabakada bulshada
Waxaa la dhisay-in dukaan
Boostada qalabka ay ku shabakadaha kale ee bulshada
PicsArt Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... Retrica 2.3.3
English, Deutsch, 中文, Русский... Steam 2.0.32